မိတ်ကပ် Brush, သစ်သားလက်ကိုင်မိတ်ကပ် brush, Bling မိတ်ကပ်တရုတ်နိုင်ငံတွင် Brush ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:မိတ်ကပ် brush,သစ်သားလက်ကိုင်မိတ်ကပ် Brush,မိတ်ကပ် Brush Bling,5Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > brush သတ်မှတ်မည် > 5pcs Brush သတ်မှတ်မည်
5pcs Brush သတ်မှတ်မည် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, မိတ်ကပ် brush, သစ်သားလက်ကိုင်မိတ်ကပ် Brush ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, မိတ်ကပ် Brush Bling R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
5 ပိုငျးပိုငျးတောက်ပပလတ်စတစ် Handleand မိတ်ကပ် Brush Kit  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တောက်ပနေစိတ်ကြိုက် High Quality မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
5 စုံကိုအသစ်လွင်ဆုံးမိတ်ကပ် brush ကို set ကိုကိုရွှေထ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလှကုန်သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်မိတ်ကပ်စုတ်တံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အရင်ကဆိုရင်များအတွက်ဖက်ရှင်နဲ့ချစ်စရာကောင်းမိတ်ကပ်ဖြီးထား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စပျစ်ရည်ကိုအနီရောင်သစ်သားလက်ကိုင်မိတ်ကပ်ဖြီးထား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်သားအလှကုန်ပစ္စည်းဖြီးထားကိုင်တွယ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နောက်ဆုံးပေါ်5PCs မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်မည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
soft Synthetic ဆံပင်အစိတ်အပိုင်းလေးတစ်ခုမိတ်ကပ် Brush ကိုငျတှယျ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဘရောင်းဟန်ပြပြုလုပ်ထားသောစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း Professional ကမိတ်ကပ် Brush ကိုငျတှယျ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wood ကအရောင်လက်ကိုင်အတူအလှကုန် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အပြာရောင်ဟန်ပြပြုလုပ်ထားသောစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း Professional ကမိတ်ကပ် Brush ကိုငျတှယျ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 5PCS အဖြူအရောင်မိတ်ကပ်ဖြီးအစုံ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သစ်သားစပါးကိုပလပ်စတစ်လက်ကိုင်6PCs ဖြီးထား  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလှအပအကောင်းဆုံးမိတ်ကပ်မျက်လုံးအနုပညာ Brush သတ်မှတ်မည် 5pcs  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Pony ဆံပင် Professional ကမိတ်ကပ်မျက်လုံးအရိပ် Brush သတ်မှတ်မည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပုလဲလိမ္မော်ရောင်စိတ်တိုင်းကျမိတ်ကပ် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သက်တန့်တောက်ပပရီမီယံမိတ်ကပ် Brush  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နယူးသတ္တု Eyeshadow မျက်ခုံး Brush ကိုငျတှယျ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အသေးစိတ်နိဒါန်း 1. ဆံပင်: အညိုရောင်အောက်ခြေနှင့်အနက်ရောင်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူဖျဒြပ်ဆံပင်, အဂန္ထဝင်အသွင်အပြင်တင်ဆက်ထားတဲ့။ အမျိုးမျိုးသောမိတ်ကပ် brush ကိုကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ကပ်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ multi-functional...
ကွယျအတိပွီးမိုဃ်းကောင်းကင်၏ထွန်းလင်းပလပ်စတစ်လက်ကိုင်တစ်စိတ်ကူးယဉ်အာကာသနှင့်အတူနောက်ဆုံးပေါ်ထူးခြားတဲ့ဒီဇိုင်းဖြီးဖြစ်ပါတယ်။ fluffy ပျော့ဆံပင်သင့်ရဲ့အသားအရေကိုအများဆုံးအဆင်ပြေခံစားပေးသည်...
အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ် YACAI 5pcs မိတ်ကပ်အလှကုန်ဖြီးထားသင်ဘာမှအဆင်သင့်မရကူညီပေးဖို့လိုအပ်မိတ်ကပ်စုတ်တံအပေါငျးတို့သရှိပါတယ်! YACAI 5pcs မိတ်ကပ်အလှကုန်ဖြီးထားတဲ့အထူးဒီဇိုင်းဖြီးပိုပြီးအဆင့်မြင့်နေ့စဉ်ဘို့အစုံသို့မဟုတ်ခရီးသွားနေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ...
မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်ရန်အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်း 5pcs မိမိစိတ်ကြိုက် Logo ချစ်စရာမိတ်ကပ်အသစ်လွင်ဆုံးပုဂ္ဂလိကတံဆိပ်မိတ်ကပ် Brush သတ်မှတ်ပေးသည်ဝှေ့နေတယ် * ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုတ်တံပေါ်ပရီမီယံ Synthetic ဆံပင်တောက်ပပျော့ပါ!...
5 စုံကိုအသစ်လွင်ဆုံးမိတ်ကပ် brush ကို set ကိုကိုရွှေထ Powder + ဖုံးကွယ် + မျက်နှာမပျက် + မီးမောင်းထိုးပြ + မျက်လုံးအရိပ် FOR5သတ်မှတ်ပေးသည်အသစ်လွင်ဆုံးမိတ်ကပ် brush ကို set ကိုကိုရွှေထ မုန့်ဖုတ်နှင့်အတူပလတ်စတစ်လက်ကိုင်သုံးတဲ့လူမီနီယံ ferrule, 100%...
အလှကုန်သုံးစွဲသူစိတ်ကြိုက်မိတ်ကပ်စုတ်တံ Powder ဖြီး + မျက်နှာမပျက်ဖြီး + မီးမောင်းထိုးပြဖြီး + အရိပ်ဖြီး + မရှိမဖြစ်တွန့်ဖြီး FOR ဤသည် 5piece အလှကုန်ဆိုရင်တော့ Matte လူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly Nano wire ကိုဆံပင်အတူလက်ကိုင်အပေါ် bling...
အရင်ကဆိုရင်များအတွက်ဖက်ရှင်နဲ့ချစ်စရာကောင်းမိတ်ကပ်ဖြီးထား Powder + ဖုံးကွယ် + မျက်နှာမပျက် + မီးမောင်းထိုးပြ + မျက်လုံးအရိပ် FOR ဖက်ရှင်နှင့်အရင်ကဆိုရင်မဘို့ရာခန့် Charm မိတ်ကပ် brush ကိုလူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly Nano wire...
ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အသေးစိတ်နိဒါန်း 1. ဆံပင်: အဖြူအောက်ခြေနှင့်စပျစ်ရည်အနီအကြံပေးချက်များနှင့်အတူဖျဒြပ်ဆံပင်, အဖက်ရှင်အသွင်အပြင်တင်ဆက်ထားတဲ့။ အမျိုးမျိုးသောမိတ်ကပ် brush ကိုကွဲပြားခြားနားသောမိတ်ကပ်လိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ multi-functional...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်4Piece မိတ်ကပ် SET ဝှေ့နေတယ်: ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သို့မဟုတ်မှာ-အိမ်မှာအသုံးပြုရန်လိုအပ်ရှိသမျှကိုအခြေခံလိုအပ်ချက်များပါဝင်သည်။ Kabuki Styles, မျက်နှာ brush, မျက်လုံးစုတ်တံ, နှုတ်ခမ်းဖြီး, ဖောင်ဒေးရှင်းမှ brush,...
ပရီမီယံ Synthetic မိတ်ကပ် Brush: ထုတ်ကုန်မဆိုစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့်မျှမသွန်းလောင်းဘဲမရှိဘဲအရည်, မှုန်သို့မဟုတ်မုန့်အခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်အတူမြင့်မားချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ် finish...
VELVETY ဒြပ် Fiber: သင်၏မျက်နှာပေါ်မှာအညီအမျှသာသနာများအတွက်မုန့်, အရည်သို့မဟုတ်အမှုန့်ကိုအသုံးပြုအဲဒီပျော့ပျောင်းသိပ်သည်းဖြီးဆံပင်ပေမယ့်သူတို့ကိုတက်စိမ်မဟုတ်, သင့်အသားအရေကိုသွန်းသို့မဟုတ်ထိခိုက်စေဘယ်တော့မှအပေါင်းတို့,...
ဤအ Eco-သတိမိတ်ကပ် brush တွေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ်အလှအပခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်အတူတက်အောင်ထားပါ လက်ကိုင် 100% ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နေကြတယ် အရည်အသွေးမြင့်နိုင်လွန်ဆံပင် bristles အမှုန့်သို့မဟုတ် eyeshadows လျှောက်ထားခြင်းနှင့်ရောစပ်အသုံးပြု set ပါဝင်သည်:...
blending, မီးမောင်းထိုးပြ, ရိပ်နှင့်ပုံများအတွက်စံပြ။ အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသော finish ကိုအောင်မြင်ရန်ကိုကူညီပါ။ အရည်, မှုန်သို့မဟုတ်မုန့်နှင့်အတူလျှောက်ထားရန် soft နှင့်သိပ်သည်းဒြပ်အမျှင်။ မိတ်ကပ်နှင့်အလှကုန်၏အဘယ်သူမျှမစွန့်ပစ်။ high-end...
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် 5PCS အဖြူအရောင်မိတ်ကပ်ဖြီးအစုံ Powder + ဖုံးကွယ် + မျက်နှာမပျက် + မီးမောင်းထိုးပြ + မျက်လုံးအရိပ် FOR ဤသည် 5piece အဖြူအရောင်မိတ်ကပ်ဖြီးဆိုရင်တော့ Matte လူမီနီယံ ferrule, 100% Eco-friendly...
သစ်သားစပါးကိုပလပ်စတစ်လက်ကိုင်6PCs ဖြီးထား
6-အပိုင်းအစပရော်ဖက်ရှင်နယ်တန်းမိတ်ကပ်ဖြီးထား, ရောနှောမိတ်ကပ်အနုပညာရှင်တွေနဲ့အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုရန် handcrafted တစ်ခုချင်းစီ ရက်စက်မှုအခမဲ့, hypoallergenic ဒြပ် bristles clean ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်ကျိုးဖို့လျော့နည်းကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်။...
အလှအပအကောင်းဆုံးမိတ်ကပ်မျက်လုံးအနုပညာ Brush သတ်မှတ်မည် 5pcs
1.This Brush သတ်မှတ်မည် Big မျက်လုံးအရိပ် Brush, အမိုးခုံးမျက်လုံး Blender Brush, အသေးစားမျက်လုံးအရိပ် Brush, ဖုံးကွယ် Brush, မျက်ခုံး Brush င်ပါတယ်။ လျှောက်ထား, ရိပ်နှင့်ရောနှောထုတ်ကုန်များအတွက် 2.This Brush သတ်မှတ်မည်ပြီးပြည့်စုံသော။...
Pony ဆံပင် Professional ကမိတ်ကပ်မျက်လုံးအရိပ် Brush သတ်မှတ်မည်
ဤသည်မျက်စိဖြီးဒဏ်ငွေမြင်းဆံပင်ကနေဖန်ဆင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့မျက်စိအရှိဆုံးအဆင်ပြေခံစားမှုပေးခြင်း, စူပါပျော့နှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောဖြစ်ပါတယ်။ မျက်စိဖြီး၏လက်ကိုင်ကိုသဘာဝသစ်သားလက်ကိုင်ဖြစ်တယ်,...
ထူသော, ပျော့ပျောင်းနှင့် fluffy ဆံပင်အခြေခံအုတ်မြစ်ကပိုသဘာဝအများနှင့်အပြစ်ဆိုဖွယ်မရှိသောအောင်, သင့်အသားအရေစိတ်ဆိုးပါဘူး ပုလဲတောက်ပအတူလက်ကိုင်ဇိမ်ခံနှင့်မြင့်မြတ်သောစိတ်ထားကိုပြသ ဒီအဖြီးလှပသောလိုင်းများနှင့်ရိုးရှင်းပြီးရက်ရက်ရောရောဒီဇိုင်းရှိပါတယ်။...
ကောင်းသောလက်ကိုင်ခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဇိုင်း, သင့်မျက်နှာလှပသောကြည့်, သင်တစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောစိတ်ဓါတ်များနေ့စဉ်ပေးပါစေ။ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြီး, ဒီဖြီးသက်ဆိုင်နှင့်သင့် features တွေအပေါ်အခြေခံအုတ်မြစ်ရောက်ပြီး,...
နယူးသတ္တု Eyeshadow မျက်ခုံး Brush ကိုငျတှယျ
သတ္တုလက်ကိုင်မျက်စိအရိပ်ဖြီးမျက်ခုံးဖြီး texture အပြည့်အဝ, သငျသညျသတ္တုတစ်ခုထူအဓိပ္ပာယ်ပေးသည် အဆိုပါပြောင်းလဲသတ္တုပုံသဏ္ဍာန်မြို့ပြအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်ချစ်စရာကောင်းထင်ဟပ်။ ဒီမျက်စိဖြီးနှင့်အတူ, သငျသညျအပြည့်အဝကိုသင်၏ဣတ်ဖျောပွနိုငျ...
တရုတ်နိုင်ငံ 5pcs Brush သတ်မှတ်မည် ပေးသွင်း
ဒီနေရာတွင် 5pcs Brush သတ်မှတ်မည် အတွက်ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ငါတို့ မိတ်ကပ် brush,သစ်သားလက်ကိုင်မိတ်ကပ် Brush,မိတ်ကပ် Brush Bling,5Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,, ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပို့ကုန်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပို့ကုန်အရည်အချင်းပြည့်ထုတ်ကုန်သေချာစေရန် 5pcs Brush သတ်မှတ်မည် ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဖြစ်စဉ်များတိုးတက်ပါပြီ။
သငျသညျ 5pcs Brush သတ်မှတ်မည် အတွက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုလျှင်, parameters တွေကို, မော်ဒယ်များ, ပုံများ, စျေးနှုန်းများနှင့် မိတ်ကပ် brush,သစ်သားလက်ကိုင်မိတ်ကပ် Brush,မိတ်ကပ် Brush Bling,5Pcs Brush သတ်မှတ်မည်,, အကြောင်းကိုအခြားသတင်းအချက်အလက်များကြည့်ရှုဖို့ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို click ပါ။
သငျသညျအုပ်စုတစ်စုသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးချင်းစီများမှာမည်သို့ပင်ကျနော်တို့ 5pcs Brush သတ်မှတ်မည် အကြောင်းကိုတိကျမှုနှင့်ပြည့်စုံသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှင့်အတူသငျသညျပေးအတတျနိုငျဆုံးမည်!
မိတ်ကပ် brush သစ်သားလက်ကိုင်မိတ်ကပ် Brush မိတ်ကပ် Brush Bling 5Pcs Brush သတ်မှတ်မည် မိတ်ကပ် Brush